अर्थ Archives - Tripura Sanchar
tripurasanchar - फाल्गुन २९, २०७७
सेयर बजारमा किन लगानी गरिन्छ ? यसको आधारभूत जवाफ हो, मुनाफा कमाउने । लगानी प्रतिफलकै लागि गरिने भए आफूले गरेको लगानीको सही ठाउँमा भएन भने डुब्छ । यस्तै सेयर बजार एउटा जोखिम भएको लगानी गर्ने ठाउँ हो । सबैले धेरै...
tripurasanchar - फाल्गुन २७, २०७७
युट्युबले जारी गरेको नयाँ कर नीतिका कारण अब युट्युबरको आम्दानी ठूलो मात्रामा घट्ने भएको छ । त्यसैपनि युट्युबमार्फत आम्दानी गुर्न चुनौतीको विषय बन्दै गएको अहिलेकाे अवस्थामा नयाँ कर नीतिले क्रियटरलाई निरुत्साहित पार्ने भएको छ । युट्युबले आउँदो जून महिनादेखि अमेरिकी...
ज्योति लाइफको आईपिओले रच्यो इतिहास, कति पर्यो आवेदन ?
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणको लागि निष्काशन गरेको आइपीओमा हालसम्म कै बढी आवेदन परेको छ । कम्पनीको आईपिओमा आवेदन दिने अन्तिम दिन आज साँझ सम्ममा १८ लाख ४ हजार ६ सय ४८ जना आवेदकबाट ३ करोड ८० लाख ५७ हजार...
आयल निगम भन्छ- १३०० ट्यांकर इन्धन चोरीमा संलग्न
नेपाल आयल निगमका डिपोहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने १३ सय ट्यांकर पेट्रोलियम चोरीमा संलग्न रहेको पाइएको छ । ती ट्यांकर भारतदेखि नेपालका केन्द्रीय र प्रादेशिक डिपोसम्म इन्धन ढुवानी गर्दा अपचलनमा संलग्न भएको निगम बताउँछ । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार...
सुन तोलाको ७० देखि ७५ हजारसम्म झर्न सक्छ !
tripurasanchar - फाल्गुन २३, २०७७
नेपाली बजारमा सुन चाँदीको भाउको ओरालो यात्रा सुरु भएको छ । केही दिनदेखि निरन्तर रुपमा घट्न थालेको सुनको भाउ अहिले झण्डै १० महिना अगाडीको हाराहारीमा आईपुगेको छ । गत वर्षको आजकै दिन अर्थात् फागुन २२ गते नेपाली बजारमा छापावाला सुनको...
tripurasanchar - फाल्गुन २२, २०७७
‘निफ्राको आईपीओ २७ बराबर १४२०’ लेखेर शेयर बजार विचार हजार लेखेको ग्रुपमा माघ १६ गते एक व्यक्तिले स्टाटस पोष्ट गरे । ‘हामीलाई पनि यति कित्ता आईपीओ पर्यो’ भन्नेेको त्यो स्टाटसमा कमेन्ट गर्नेहरुको ओइरो लागेको थियो । २७ जनाको नामबाट आवेदन...
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओ आजदेखि, कति भर्ने आवेदन ?
काठमाडौं । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले आज (शुक्रबार)देखि सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निष्कासन गरेको छ । एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको प्राथमिक सेयरमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ६६ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइनेछ । कम्पनीले जारी पुँजी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३०...
नेपालको परिस्थिति अझ नराम्रो हुनेवाला छ : डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि
काठमाडौं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधि डा. जोस भ्यानडिलिएरले नेपालमा हाल देखिएको कोरोना संक्रमणको संख्या सुरुवातमात्रै भएको र भविष्यमा संक्रमितको संख्या अझ धेरै बढ्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मंगलबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भ्यानडिलिएरले विश्वमा हेर्दा समग्र जनसंख्याको...
ठेलाको व्यापार बन्द, आधा कर्मचारी घरै बस्नुपर्ने
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण बढेसँगै सरकारले केही प्रतिबन्धसहित नयाँ नियम लागू गरेको छ । फेरि लकडाउन हुने चर्चा भए पनि सरकारले देशव्यापी रुपमा बन्दाबन्दी गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा पूर्णरुपमा रोक लगाउनुपर्ने र सार्वजनिक...
त्रिपुरा संचार - साउन २१, २०७७
२१ साउन, काठमाडौं । कोरोना स.क्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउन पछि २२.५ प्रतिशत कर्मचारीहरुले रोजगारी गुमाएको अध्ययनले देखाएको छ । कोभिड पछिको असरबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैै नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योग/व्यवसायहरुले २२.५ प्रतिशत कर्मचारी÷कामदार कटौती गरेको जानकारी दिएको...